Kunyangwe kare takagovana akawanda mamwe maRPG Gameplays evatambi veandroid. Asi panguva ino takaunza chimwe chinhu chitsva uye chakasarudzika chevatambi chinonzi Daily Lives of My CountrySide. Iko vatambi vakapa akadzama maficha ekunakidzwa.
Zvakadaro, matambiro emutambo anoita seakasiyana nemimwe mitambo. Avo vanofarira kutamba yakadzika nyaya-yakavakirwa mutambo wekushandisa. Paishandiswa mavara kusanganisira animation mukati akanaka uye akatsetseka.
Ipapo isu tinokurudzira avo android gamers kuisa iyo chaiyo RPG Game. Iko kune akawanda anime mavara anosanganisira anime anoshandiswa kune vatambi. Saka iwe unofarira kutamba mitambo yakadai wobva waidhawunirodha kubva pano.
Chii chinonzi Hupenyu Hwezuva Nenyika YanguSide Apk
Hupenyu Hwemazuva ese eNyika YanguSide Android ndeye online simulation-yakavakirwa mutambo papuratifomu. Iko kwakasiyana anime mavara anosanganisira zviwanikwa akagadzirwa achitarisa nyaya. Kunyangwe vatambi vakapa izvi zvakasiyana-siyana zviitiko zvinokatyamadza kuti vanakidzwe nenguva.
Iyo chaiyo gameplay yakagadzirirwa vese Vechidiki uye Vakuru vanhu. Vana vanofanira kudzivisa kutamba imwe gameplay. Nekuti mamwe maanimation anosanganisira nyaya akatinetsa.
Zvichireva kuti vana havanzwisise nyaya yacho. Saka mumamiriro ezvinhu akadai, isu tinokurudzira vatambi vane kuseka kwakanaka uye pfungwa vanofanira kutora chikamu uye kutamba basa ravo. Ngatimbotii kana uri kusangana nedambudziko rekutora chikamu.
Zvadaro tinokurudzira vatambi kuti vatarise kubatana kwavo kweinternet. Nekuti kutamba online kunoda yakagadzikana internet yekubatanidza. Avo vari kusangana nedambudziko rekutsvaga yakagadzikana internet yekubatanidza vanogona kunakidzwa nemutambo muoffline mode.
zita Hupenyu Hwemazuva ese eNyika YanguSide
zera 169 MB
Package Zita org.lives.countryside.the66
Patinoongorora nyaya huru yemutambo, takabva tawana mukomana anonzi Callum achishanyira tete vake. Mainini vainge vatozivawo nezvekuuya kwemukomana uyu. Asi akanga asingazivi nezvenguva, saka akamirira mukomana kwenguva refu.
Mushure mekunge aona Callum pamusuwo wemba yake, anotanga kunzwa akasununguka. Zvakangodaro, Callum anoita seanojairana nenzvimbo uye rangarira mazuva ake ekare. Zvakadaro tete vanogamuchira Callum nekudziya kukuru uye vanomupa hug hombe.
Mukomana anoita seakasununguka asangana na aunty akafunga kunogara naye. Paakangopinda mumba, vakadzi vacho vakamupa chokudya. Akabva angoona mwanasikana wake. Mukomana akarangarira musikana uye chiso chake.
Kunyange zvazvo akanga asingakwanisi kumufuratira ndokutanga kukurukura zvakanaka. Zvakadaro musikana anofarawo kusangana nemukomana uye anoita seanoyevedza. Mainini vanoratidza Callum imba yake ndokupa sumo pfupi maererano nemitemo.
Paakapedza kusuma, zvino Callum asara ega mumba. Mukomana wacho akasarudza kubatsira tete uye nyore nyore kugadzirisa mamiriro acho ezvinhu. Saka iwe unotenda hunyanzvi hwekutamba hunogona kubatsira Callum wobva waisa Daily Lives yeNyikaSide Yangu Dhawunirodha.
Nyaya yose inokiyiwa kuti iverengeke.
Anime akawanda mavara anoshandiswa.
Smooth HD mifananidzo inoshandiswa kune vatambi.
Mamiriro enyaya anogona kusiyana nekufamba kwenguva.
Iyo gameplay inochengetwa iri nyore uye 2D.
Maitiro Ekurodha Hupenyu Hwemazuva ese eNyika YanguSide Apk
Kunze uko mawebhusaiti mazhinji anoti anopa shanduro yekushandisa yemitambo app yevashandisi veandroid. Zvakadaro mazhinji ari kunze uko anosvikika mafaera ekutamba ari emanyepo uye akaora. Saka chii chinofanira kuitwa nevatambi veAndroid mumamiriro ezvinhu akadaro kana vasingakwanise kuwana chaiyo sosi?
Saka uri kunetseka kuwana online echokwadi sosi yekurodha iyo Apk faira. Isu tinokurudzira avo android gamers kushanyira webhusaiti yedu. Dhawunirodha zviri nyore iyo yazvino vhezheni yemutambo Apk faira yemahara nekudzvanya kumwe chete.
Iyo yekutamba application yatiri kuratidza pano ndeye yepakutanga. Kunyangwe tisati tapa iyo Apk mukati yekurodha chikamu, isu tinoisa iyo yemitambo app pane akasiyana android smartphones. Mushure mekuisa mutambo hatina kuwana dambudziko guru mukati.
Isu takatoburitsa akawanda emamwe maandroid emitambo maapplication. Izvo zvine hukama neMitambo Yekutamba uye inonakidza kutamba munguva yemahara. Kuti uongorore iyo mimwe mitambo yehukama ndapota tevera zvinongedzo. Zviri Amor Doce Apk uye SparkLite Apk.
Kana iwe uri fan hombe yeRole Play Mitambo uye uchitsvaga yepamhepo yechokwadi chikuva. Zvekudhawunirodha yazvino vhezheni yeDaily Lives yeNyika YanguSide. Ipapo isu tinokurudzira avo android gamers kushanyira webhusaiti yedu uye kuidhawunirodha zviri nyore.
Categories Kudamba, Games Tags Hupenyu Hwemazuva ese eNyika YanguSide, Hupenyu Hwemazuva ese eNyika YanguSide Android, Hupenyu Hwemazuva ese eNyika YanguSide Apk, Hupenyu Hwezuva Nenyika YeNyika Yangu Dhawunirodha, RPG Game Post navigation
Rwizi Monster 777 Apk Dhawunirodha Ye Android [Casino App]